Umndeni we-deepfake 'ghost' PsyOp wokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso 'samaphoyisa acatshangwayo' (ingxenye ye-3): UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-22 Okthoba 2019	• 10 Amazwana
Umndeni we-Ghost, baba ghost, indodana ghost. I-ghost ghost izotholakala maduze engadini ye-ghost, ngoba izindaba ze-ghost kumele zihlale zithokozisayo futhi "zithembekile". I-PsyOp ethula amapholisa kamcabango kaGeorge Orwell futhi ikwazi ukubheka ngemuva kwayo yonke iminyango yangaphambili ngaphandle kwe-war search. Indaba ibekwa engqondweni yakho nsuku zonke nguDe Telegraaf; iphephandaba elibuye futhi lisekele umbuso owaqhubeka nokuhlasela ngo-'40 / '45. Futhi lowo mthetho wokuhlaselwa uyeza futhi namuhla.
Ukuthi umthetho wokuhlasela uzofika ngokushesha wabonakala ngesikhathi sokuqala Ukusakaza kwe-Peacock ngale ndaba eyisipoki. UJanny Knol, oyiphini lomkhuzi wamaphoyisa (ongaziwa ukuthi ungowobulili obuthile), ungitshele ukuthi phambilini amaphoyisa abeseye epulazini eliyisiporho ngoba kukhona izinsolo zokuba khona kwamahlathi okhula. Kodwa, uthe, amaphoyisa akakwazanga ukubheka ngaphakathi, ngoba ubaba wesipoki ubengabavumeli ukuba bangene. Usuvele uyazi ukuthi kusetshenziswa umthetho omusha lapha okufanele ususe isithiyo ukuze ubheke ngemuva komnyango wangaphambili, ngakho-ke sizokwakha futhi indawo yokuhlaselwa esikhathini samanje. Amaround-up lapho wonke umuntu omemezela imibono yokuphambuka angathathwa.
"Ah, Vrijland, awuhambi yini kancane manje? Ngabe awuhambi kancane?"Wake wabuza umbuzo ofanayo ngemibiko yabezindaba? Uhlala ugxeka abaphathi bokuqonda abakhokhelwa kahle nabakhokhelwa kahle, yebo, bavuma izihambeli zetafula; izinhlobo ezifana noJeroben Pauw? "Yebo, kwesinye isikhathi zibucayi!”Yebo, basebenza ngendlela ekuphazamisa emangeni amakhulu futhi iqhubeke nendaba eyisisekelo. Ngabe awukaboni? Yonke le ndaba cishe ayisiyona into edlula ukusebenza kwengqondo (PsyOp), njengokuthi ngaphakathi ingxenye ye-1, ingxenye ye-2 en ingxenye ye-3 zezindatshana zami. Kungaba kuhle uma ufunda lezo zihloko nokwabelana, ukuze kungabikho muntu ongathi:UWir haben es umzala ufisa".
Ndodana kaSpoky, uyayazi leya ndodana eyabhuntsha obhiya be-5 ukukhulisa i-alamu enkulu mayelana "nokuncishwa inkululeko okungekho emthethweni" ngobaba, manje idlala indima yokubeka i-ajenda ye-LGBTI emephini. Ngoba ngokushesha sinesinye sezihloko ezibalulekile, lapho umbuso uzokunikeza khona kamuva the psycholance ingaphonsa esitokisini ukuze ibhekwe. Isibonelo, uma ngabe kukhona ukuphikisana nenkulumo-ze ye-LGBTI ezikoleni zamabanga aphansi, kusukela manje kuqhubeke uzoxhunyaniswa nobaba wezipoki ovela kule ndaba eyisipoki. Ngemuva kwakho konke, wathatha izingane zakhe esikoleni futhi wayengobudlelwano besilisa nowesifazane. Lokhu kucace bha kumavidiyo wakhe amahle angenasisekelo, ngokusho kukaDe Telegraaf:
Kucace bha ezintshumayelweni zikaGerrit Jan van D. ukuthi uthini umbono wakhe ngobudlelwano obuphilile. Ngokomyalo kaNkulunkulu, indoda kufanele ingene ebudlelwaneni nowesifazane. Uma ungakwenzi lokho, khona-ke usuku 'luthando olungcolile', khona-ke usukume ngokomoya emaqakaleni akho 'emanzini okuhambisa indle', kusho uVan D. kwenye yezintshumayelo zakhe.
Luhlelo lobuqili futhi oluhle kakhulu esilufakazayo. Ubaba uGerrit Jan ('ongu-ghost baba') unemibono 'eyisipoki' futhi ngokusobala unokuthile okuphikisana nezitabane. Futhi lokho kwaba yimbangela yendodana uJan, owayephupha ngokubalekela eCanada (noma usevele ekhona, lokho akucaci, ngoba akukho okucacayo). Isithombe se-PsyOp sidwetshiwe ukuthi ubaba wayefuna ukukhulisa izingane heteronormatively futhi ake indodana ghost uJan abe izitabane. UJan wayefuna ukubalekela umbuso kababa "uJohn Eagle", leso isithombe. Cishe waze wathandana ne-bartender eRuinerwold. Lowo bartender omuhle owamsiza washayela amaphoyisa.
Abantu benziwa imithambo belungele ukwethulwa kwamaphoyisa acabanga uGeorge Orwell. Bambalwa abantu baseDashi abazokulwa nalokho. Eqinisweni, abaningi bazokuthola kukuhle ukuthi abantu abanemicabango ephambukayo, ngokwesibonelo i-heteronormativity (ubungqingili njengokwejwayelekile) umbono okufanele uvalelwe ekamu lokufundisa kabusha (ukunakekelwa kwe-GGZ). Futhi ngenxa yalokho kusesandleni kakhulu ukuthi amaphoyisa akasasadingi i-search warrant, kodwa angavele angene. Ubaba uGerrit Jan kubikwa ukuthi ulethe izingane zakhe eqenjini lesikole sasekhaya ngoba bezilandela imithetho yombuso. Lokhu mhlawumbe kukhombisa ukuthi izingane zakhe zifundiswe i-LGBTI standardativity futhi akazange avumelane nalokhu. Ngakho-ke uma ngokuzayo ubona kungafanele ukuthi izingane zakho esikoleni samabanga aphansi kufanele zilalele indlovukazi ehudulayo ebatshela ukuthi abayona umfana noma intombazane, kodwa ukuthi kodwa basengabukhetha ubulili babo futhi usho okuthile ngalokho, lapho ke umuntu ongahle abe ngumdidiyeli. Lo mndeni oyisipoki usunakekele lokho.
Ngakho-ke sibona ukulungiswa komthetho wokuhlaselwa, kepha ngenxa yokuthi awusabizwa futhi ngoba abantu balethwa kwimodi yokwamukelwa ngokusebenza kwengqondo, akekho noyedwa ozophikisana nokungeniswa kwalesi sicelo samaphoyisa nezindlela zawo zokuhlasela.
Uma ngicabanga ngeHolland, ngibona imifula ebanzi ihamba kancane phakathi kwamathafa angenamkhawulo, imigqa yama-poplars angacabangeki emi njengezimpaphe ezinde ekugcineni; nasezindaweni ezinkulu zamapulazi amiswe ilanga lonke, amaqembu ezihlahla, amadolobhana, imibhoshongo encishisiwe, amasonto nama-elms esimweni esihle kakhulu. umoya ulenga futhi ilanga lishiswa kancane kancane emiphumeleni enezimpunga ezimpunga, futhi kuzo zonke izifunda izwi le-Telegraaf liyabanjwa futhi lizwakale ngaphandle kokugxekwa.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: npostart.nl, assercourant.nl
Amathegi: 1984, ukufa, I-Eagle, afakiwe, amaphoyisa acabanga, kucabanga amaphoyisa, George, okutholiwe, Janny Knol, John, ukusebenza, Orwell, kwengqondo, psyop, kugasela, ukuhlaselwa, umthetho we-razzia0, imithetho yokuhlasela, URuinerwold, ghost umndeni, umama wesipoki, ghost baba, ghost son, ilahlekile
23 Okthoba 2019 ku-22: 36
Ngokwesimo esingajwayelekile nesiphukuphuku
Imfihlakalo eyisimanga ezungeze ukubulala okubili? selokhu kuboshwe umsolwa
ngenxa yokutholwa kwezidumbu ezimbili ezingaphili kuMartin Luther KingLaan eDiemen.
Uyini umbuzo onengqondo, kungani batholwa ngubani futhi kanjani? , yonke into ihlala endaweni engaziwa, e-spooky, inezindlu ezivelelayo.
Kubukeka sengathi kuyisiqephu sesine sensipho, i-NL incane.
Umsolwa akakaze avula umnyango kakhulu nangaphezulu nokuthi kungani bekungekho ama-ambulensi, ngemuva kokuthi ngabe kunababili !!! ukuzisola abafileyo, ukuvuselelwa kanye nemibuzo eminingi ...
24 Okthoba 2019 ku-21: 42
Ah, yebo bekuyisikhathi futhi sokuba kube nomyalezo omusha kwaTelgraaf .. ngabe bazogcina iso lami emugqeni wami we-Facebook?
Umbhalo uhlanganiswe kahle:
(kumahhala ukufunda ngemodi ye-Incognito yesiphequluli seGoogle Chrome)
Ngikholelwa ukuthi ingxenye yesonto eNetherlands ikholelwa ezingelosini naseamadimoni. Eqinisweni, izigidigidi zabantu emhlabeni zikholelwa ezingelosini, amadimoni noma kuma-jinns (ngokuya nge-Islam).
Lokho kusho ukuthi silinde ukusakazwa okulandelayo kwePauw lapho uchwepheshe wehlelo azokuchaza ukuthi imibono kaJohn Eagle ibukeka kanjani!
Uphi uPeter R. kule ndaba? Hawu yebo, leyo ntando empeleni izobizwa uma kuhlolwe i-DNA umama we-ghost! (kepha lowo ngumqondo nje wokuthi ukulandelana kweskripthi kuzobukeka kanjani)
28 Okthoba 2019 ku-13: 39
Enye yeziphetho zami ngemuva kokufunda izindatshana zakamuva kule webhusayithi:
Sonke kufanele siqinisekise ukuthi, phakathi kokunye, amalungelo alandelayo awasuswa kithi, ngoba la malungelo ayohlala esongelwa ngabantu nezikhungo ezifuna amandla amaningi namandla:
- ilungelo lokwenqaba ukuseshwa kwendlu ngaphandle komyalo wenkantolo
- ilungelo lokufunda ekhaya (mhlawumbe ngaphansi kwezimo ezithile zekhwalithi)
- ilungelo lokwenqaba ukugonywa
- ilungelo lokuzivikela
- ilungelo lezikhulu zefilimu ezikhundleni uma nje ungaziphazamisi emsebenzini wazo
28 Okthoba 2019 ku-13: 48
Kepha ngaphezu kwakho konke: ilungelo 'lokucabanga okufunayo'
Ukwethulwa kwamaphoyisa omcabango.
Ucabanga ukuthi, le ndoda yayikholelwa "kwizipoki." Cishe abantu abayizigidigidi ze-5 emhlabeni benza lokho. AmaKhristu asezingelosi namademoni, amaSulumane ama-ditto namaKristu angamavangeli akholelwa ukuthi iNkosi yathumela umoya wakhe oNgcwele ngePhentekhosti. Ngakho-ke sineholide leWhitsun.
28 Okthoba 2019 ku-15: 31
Siyabonga ngokungezwa, kuhlala kwehla kulokho.
Wonke umuntu unelungelo lokucabanga / ukukholwa akufunayo, kanye nelungelo lokwenza lokho inqobo nje uma lokhu kungephuli amalungelo nenkululeko yabanye.
Umqondo wokuziphatha awunzima kangako kubantu abacabangayo, futhi akudingeki uvumelane ngemininingwane.
28 Okthoba 2019 ku-15: 42
Futhi mayelana nento yezindaba uqobo, kuyahlekisa ngempela ukuthi ukubika okukukhulu / okuningana kangakanani, futhi lokhu kukhombisa inhloso eyisisekelo. Ukuthi le nhloso iwukujabulisa abantu abasebenza ngokweqile ngezikhathi zakusihlwa, noma ukukhuthaza ushintsho emithethweni, akunangqondo. Iqiniso liwukuthi kumele siphephise amalungelo ethu nokuthi uyalinxusa leli ngicabanga ukuthi kuyinto enhle.
28 Okthoba 2019 ku-21: 24
bheka ixazululiwe, akufanele kube ngabantu abanzima. Mane nje uthathe uhlole….
29 Okthoba 2019 ku-10: 51
Imicimbi ekhethekile kamuva nje. Kulezi zinsuku, ngemuva kwecala lika-Anne Faber, ijaji selithole nendima eyimbili njengesazi sokusebenza kwengqondo. Izinkampani zezentengiselwano manje sezinikezwe umsebenzi omabili njengamaphoyisa ...
1 November 2019 ku-23: 49
Umama van Ruinerwold akazange angcwatshwe, kodwa ngasese kwashiswa umlilo ngokwe-Telegraaf, ngokusebenzisa
I-crematorium ikhipha ifayili elikhethekile, yini okufanele siyenze lapho?
ngo. Umama akazange angcwatshwe, kodwa ngokusho kwebhola lekristalu leTelegraaf.
Hhayi wangcwatshwa engadini kodwa washisa nge-okuthiwa "ifayili elikhethekile".
Asivumelekile ukukhipha imininingwane, kepha?
2 November 2019 ku-13: 58
Abantu abanombono wobuKristu ngokuphila abavamisile ukushiswa ngenxa yenkolelo yokuthi 'baphinde baphuma empumalanga'.
Kepha bafunda nalokhu, ngakho-ke balinde isipikha esilandelayo ..
« Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-2)
Ukuhlasela kwamaphekula okungelona iqiniso eLondon, eManchester, eParis, eBarcelona naseRotterdam ku-23 nase-24 Okthoba? (UPDATE)) »
Ukuvakashelwa okuphelele: 14.002.223